ဆောင်းဦးလှိုင် တကိုယ်တော်ပွဲမှာ အနှောက်အယှက်များနဲ့ကြုံရ – Saung Oo Hlaing’s concert | MoeMaKa Burmese News & Media
အမေရိကန်ရောက် မြန်မာပန်းချီဆရာ သန်းဌေးမောင် မိုးဖီးမြို့မှာ ပန်းချီပြ
Tu Maung Nyo - The Give Up Policy of Kyaw Win
SAMSUNG GALAXY Note5အမှန်တကယ် ထွက်ပြီ
Po Htet - Leave your ego behind when meeting Suu Kyi
Shwe Thanzin ဖေ့စ်ဘုတ်
ဆောင်းဦးလှိုင် နဲ့ ရွှေသံစဉ်ကိုဝင်းမော် (ဓာတ်ပုံများ – Burma VJ Media Network)
မနေ့က(၁၇-၂-၂၀၁၂)ည ၇း၃၀ မှ ၁၁း၀၀ အထိ တေးသံရှင်ဆောင်းဦးလှိုင်ရဲ့ နှလုံးသားတွေ လှူမယ့်ည ဆိုတဲ့ ONE MAN SHOW ကို ရန်ကုန်မြို့၊ မြို့မကျောင်း လမ်းမှာရှိတဲ့ အမျိုးသားဇာတ်ရုံမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဥက္ကာဦးသာဦးစီးတဲ့ Plus Three Band က တီးခတ်ပေးပါတယ်။ ဥက္ကာဦးသာ ဆိုတာ ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေတုန်းက ထင်ရှားခဲ့တဲ့(ရွှေသံစဉ်)အဖွဲ့မှာ Keyboard တီးခဲ့ဖူးသူပါ။
show မှာရမယ့် အနုပညာကြေးတွေအပြင် လာရောက်လှူဒါန်းကြတဲ့ ငွေတွေကိ်ု နာရေးကူညီမှုအသင်း၊ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၊ မိဘမဲ့ကလေးများ စသည်တို့ကို ပြန်လည် လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ပွဲကို ရွှေသံစဉ်တေးဂီတအဖွဲ့မှ ဂီတမှူး ကိုဝင်းမော်လည်း တက်ရောက် အားပေးခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ပွဲ မကျင်းပမီ ညနေပိုင်းက သူဖိတ်ကြားထားခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်း တွေဖြစ်တဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေလာမယ် ဆိုရင် ပွဲလုပ်ခွင့် မပြုဘူးလို့ သက်ဆိုင်ရာ ဒေသအာဏာပိုင်တွေက လာရောက်ပြောကြားခဲ့တဲ့အတွက် သူဟာအကျပ်အတည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်၊
ဒါပေမယ့်သူ့ သူငယ်ချင်းတွေက နားလည်မှုရှိစွာ မလာတော့ပါဘူး-ဆိုလို့ သူစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ ဒီပွဲကို တင်ဆက်ခဲ့ရပါ တယ်။
နာရေးကူညီမှုအသင်းဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဆောင်းဦးလှိုင်ရဲ့ပွဲကို ဦးကျော်သူ၊ မရွှေဇီးကွက်တို့အပါအ၀င် အသင်းသားတွေလည်း လာရောက်ကြရာမှာ အသင်းသားတွေရဲ့ကားကို ပေးမ၀င်တာ၊ အသင်းဝတ်စုံနဲ့ ပေးမ၀င်တာတွေလည်း ပြုလုပ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
၈၈ က မနီလာသိန်းတို့အဖွဲ့ ရောက်လာချိန်မှာလည်းတူညီ ၀တ်စုံနဲ့ မ၀င်ဖို့ ဟန့်တားခံခဲ့ရပါတယ်။
ဒီလို အခက်အခဲ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာတွေကြားကနေဘဲ ဆောင်းဦးလှိုင်ဟာ ဒီပွဲကို အောင်မြင်စွာ တင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံး (ကျောင်း )သီချင်းကို ပရိသတ်နဲ့ သံပြိုင် မတ်တတ်ရပ် သီဆိုကြရင်း ပွဲကို လှပစွာသိမ်းခဲံ့ ပါတယ်။
16 Responses to ဆောင်းဦးလှိုင် တကိုယ်တော်ပွဲမှာ အနှောက်အယှက်များနဲ့ကြုံရ – Saung Oo Hlaing’s concert
ဝေလင်း on February 18, 2012 at 1:34 pm
အဲဒါကွ ဒီမိုကရေစီသိန်းစိန်ရဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ မှတ်ထား
myo naing on February 18, 2012 at 5:01 pm
ဒီရက်ပိုင်းဖြစ်နေတဲ့အနှောက်အယှက်တွေဟာ သွေးရိုးသားရိုးမဟုတ်နိုင်ပါဘူး…နိုင်ငံရေးလွတ်လပ်ခွင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအပြောင်းအလည်း ကိုဦးတည်းလျောက်လှမ်းနေတဲ့အချိန် ခောတ်ဟောင်းကငြင် ဆိုးအကျင့်ဆိုးတွေ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင် အလျော့ပေးအညံ့ခံရဘို့ ဖိအားပေးမှု့ တွေကိုကျော်လွှားနိုင်ဘို့စည်းရုံးညီညွတ်တဲ့စိတ်တွေနှင့် အယောက်တိုင်းကိုယ်စီမွေးနိုင်ကြရမှာပါ…ရဲ့ ဝန့် စွာဦးဆောင်နေတဲ့ အကျော်အမော်တွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေ ၀ိုင်းရံအားပေးအကာကွယ်ပေးကြရမှာပါ…ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်အမျိုးကို ချစ်တယ်ဆိုလျင်တော့ ဒီလိုအခြေနေရောက်နေနှင့်ပြီးမှတော့အယောက်တိုင်းရဲရဲဝန့် ဝန့် နဲ့အမှန်တရားအတွက်…ဓါးတချောင်းဒုတ်တချောင်းကိုင်မြှောက်စရာမလိုပါဘူး…အမှန်တရားအတွက်ရင်ကော့ပြရုံလောက်နဲ့ တင်လုံလောက်ပါတယ်…
ပြုံး on February 18, 2012 at 5:33 pm
yinmoesan on February 18, 2012 at 6:01 pm
ဘာတွေလည်းဟ အခုထိနောက်ပြန်ရောဂါထတုံးပဲလား လွတ်လပ်မှုဆိုတာဘာလည်း၊သူတပါးကိုမထိ
Aung Myint on February 18, 2012 at 6:17 pm
What doesaspring do? Put it between the thumb and pointing fingers. A spring’s behavior can be easily seen.
Mg Mg on February 18, 2012 at 11:00 pm
Ko Win Maw,
Please let the music flow again through your guitar. The audience is surely looking for your good understanding, arrangement and interpretation on the songs that your group played before.
မမီးမီး on February 18, 2012 at 11:15 pm
အစိုးရက ဘာကို ကြောက်နေတာလဲ၊ သီချင်းဆိုတာကို လာကြည့်တဲ့ ပရိသတ်ကိုလည်း ဘာနဲ့ မလာရ၊ ဘာမဝတ်ရနဲ့၊ စိတ်ကုန်ပါတယ်၊ အခက်အခဲတွေကြားက နားလည် အားပေးတဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ နဲ့ မဆုတ်မနစ်ဇွဲ နဲ့ ကြံကြံခံပြီး ကြိုးစားခဲ့ ကိုဆာင်းဦးလှိုင်ကို လေးစားပါတယ်။
ကိုကို on February 19, 2012 at 8:42 am
ကောင်းတော့ မကောင်းဘူး။ ခုမှစဉ်းစားမိတာရှိလို့ ပြောပါရစေ။ ကိုဆောင်းဦးလှိုင် အနေနဲ့ အခုပွဲကို အစိုးရကပိတ်လို့ မလုပ်ဘူးလို့ ဖျက်လိုက်ရင် ဘာဖြစ်လာမလဲ။ အားလုံးစီစဉ် ပြီးသားမို့ အလှူအတွက် မဖြစ်တဲ့အပြင် အရှုံးသေချာပေါက်ပေါ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် နောက်တကြိမ်မှာ အစိုးက အလို ဒီမိုကရေစီ မဆန်တဲ့ တားဆီးပိတ်ပင်မှုတွေ ( ၈၈ မလာရ၊ တူညီဝတ်စုံ မဝတ်ရ) ဆိုတာတွေ လျော့သွားမယ်လို့ယူဆပါတယ်။ အကြမ်းမဖက်နည်းကို ကိုယ်ကျင့်တရားအရ( moral principle) အရမဟုတ်ပဲ မဟာဗျူဟာအရ (strategically) တိုက်ခြင်းဖြင့် ဒီမိုကရေစီ မဆန်တဲ့ အစိုးရရဲ့ ထောက်တိုင်တွေကို နည်းအောင်လုပ်ယူကော ဘယ်လိုဖြစ်လာပါမလဲ။ အကြမ်းမဖက်လှူပ်ရှားမှု ဟာ လမ်းမပေါ်ငြိမ်းချမ်းစွာ ထွက်ဆန္ဒပြမှ မဟုတ်ပါဘူး အများကြီးပါ။ ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားပါစေ…..
ကိုကို on February 19, 2012 at 8:47 am
ပြောစရာနဲနဲကျန်ခဲ့လို့ဆက်ပြောပါရစေ…. ပွဲကို သိပ်မပျော်ပဲကျင်းပရတာထက် တကယ့်ကို စိတ်ရောကိုယ်ပါ သူငယ်ချင်းများစုံစုံလင်လင်နဲ့ ပျော်ရွင်စွာ ကျင်းပနိုင်ပါက အနုပညာရသကော ပိုခံစားနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ပြီးမှ လာပြောရအောင် မင်းကဘာကောင်မို့လဲလို့ မေးရင် ဘာမှ မဖြေပဲ
” ပြုံး” ပြီးပဲနေလိုက်ပါမယ်….. 🙂
ak on February 19, 2012 at 9:08 am
gerald winston on February 19, 2012 at 9:54 am
this is my first blessing in Burmese language. Now I am learning how to use Burmese fonts.
kyaw soe on February 19, 2012 at 11:00 am
government is digging his own grave.
မောင်ကောင်း on February 19, 2012 at 3:11 pm
ဘယ်မှာလဲ လူ့အခွင့်အရေး ၊ သံကောင်းဟစ်နေကြတာကတော့ ဒီမိုကရေစီဆို ဘာလဲ သူတို့ကိုယ်တိုင် ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို နားမလည်ကြတာလားမှမသိတာ အော် ဒီမိုကရေစီ… မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ….. ရင်လေးပါတယ်နော်……
phyu on February 19, 2012 at 5:30 pm
အခုစာကလေး အခုထမင်းကြော် ဘယ်လိုအစိုးရနဲ့လာတွေ့နေသလဲမသိဘူး..ဒါတွေကိုဘယ်သူ ဦးဆောင်လုပ်နေသလဲဆိုတာ ဖေါ်မထုတ်နိုင်ကြဘူးလား..မီတယာသတင်းထောက်တွေလုပ်ကြပါအုံး သမ္မကြီးလား၊ဒုသမ္မလား၊ လွတ်တော်ဥက္ကဌလား၊ ကြံ့ဖွတ်ပါတီဝင်တွေလား..အရှက်မရှိတဲ့ကောင်တွေ
မနာလိုတဝင်တိုစိတ်တွေနဲ့ ၊ပြောတော့တစ်မျိုးလုပ်တော့တစ်မျိုး ဒါကြောင့်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအားလုံးမဖွင့်
ဂဂ နာရီ ၅၀ အစာငတ်ခံခဲ့သူ on February 19, 2012 at 10:44 pm
အခုအတိုင်းသာဆိုရင်တော့ဒီအစိုးရ သိပ်မဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်နော်။ စစ်စော်တွေနံနေရင်ဖြင့်ဘယ်မှာလာပြီးခောတ်မှီဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ဒီမိုဂရေစီနိူင်ငံသစ်ကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါ့မလဲ။
ye mon aung on February 20, 2012 at 7:21 pm
Now alot mad xxxs want to attack to democracy peoples.